Caaqil Cabdiqani MF Ducaale, Ceerigaabo: “Gobolka Sanaag baa la isku haystaa dib-danbe u maqli maysaan” (dhegayso) – Radio Daljir
Caaqil Cabdiqani MF Ducaale, Ceerigaabo: “Gobolka Sanaag baa la isku haystaa dib-danbe u maqli maysaan” (dhegayso)
Noofember 10, 2017 8:58 g 1
Ayada oo ololaha doorashooyinka Somaliland uu si xawli ah uga socdo deegaanada uu maamulku ka arrimiyo ayaa waxaa hadana isa soo taraya warar hoose oo sheegaya in aysan doorasho ka dhici doonin badi gobalka Sanaag. Caaqil Cabdiqani Maxamuud Faarax Ducaale oo kamid ah hoggaanka bulshada gobolka oo la soo xiriiray Daljir ayaa waxa uu caadka ka qaaday in “haddii awal la dhihi jiray qaybo sanaag kamid ah baa doorasho ka dhacaysaa, maanta wax doorasho la yiraahdaa kama dhici doonto gobolka Sanaag.”
Booqashadii Muuse Biixi, musharraxa Xisbiga Kulmiye, uu ku tagay magaalada Hadaaftimo kabacdi, sida uu ku soo warramayo wariyaha Daljir ee Gobolka Sanaag, waxaa isla markiiba dhinaca kale ka biloowday olale kahortag iyo mideyn bulsho oo ay bilaabeen cuqaasha Gobolka Sanaag, ayna si mideysan u qaateen go’aan bulshadu u dhantahay oo marna lagu mideynayo bulshada, marna looga hortagayo doorashoyinka Somaliland.
Deegaanada bannanbaxyadu gilgileen waxaa kamid ah Damalo Xagare, Hadaaftimo, Yubbe, Carmale, iyo Xingalool. Waxaa kale oo socda qabanqaabada isusoobax bulsho oo ka dhaca Ceerigaabo.
Sida ay Radio Daljir la qaybsadeen qaybo kamid ah hoggaanka bulshada deegaanka, waxaa berri degmada Ceerigaabo ka dhici doonaa bannaanbax iyo isusoobax bulsho oo aan horay degmada Ceerigaabo uga dhicin tan iyo sannadkii 1991 markaas oo ururuka SNM qabsaday Ceerigaabo, ugana sii gudbay degmada Damalo Xagare, meesha ururkii USC asna qabsaday Xamar iyo badi koonfurta Soomaaliya.
Dagaalkii kharaaraa ee Damalo Xagare kabacdi, waxaa mar kale la isugu yimid degmada Ceerigaabo, waxaana heshiis lagu gaaray in degmada laga saaro maleeshiyaadkii SNM. Waqti yar kabacdina waxaa la gaaray “heshiiskii afarta qabiil ee 1991,” kaas oo ahaa heshiis taabagalay tan iyo biloowgii sannadkii 2004.
Wixii ka danbeey sannadkii 2004 waxa ay Somaliland si toos ah u sheegatay lahaanshaha iyo maamulka degmada Ceerigaabo.
Isusoobixii laabaad ee degmada Ceerigaabo waxa uu ahaa sannadkii 2011, kaddib markii uu Axmed Cabdi Xaabsade oo markaas ahaa Wasiirka Howlaha Guud ee Somaliland uu degmada Ceerigaabo kaga dhawaaqay in Shilin Soomaaligu mamnuuc ka yahay deegaanka. Bannaanbax ballaaran oo bulsho kabacdi, mar kale degmada Ceerigaabo waxa ay u qaybsantay illaa iyo hadana u qaybsantahay laba dhinac, dhinaca Shilinka Laandhka, oo Somaliland maamusho, lehna dhammaan astaamihii maamul, iyo dhinaca Shilinka Soomaaliga oo dadka deegaanku sheegtaan Puntland, laakiin dowladda Puntland aysan illaa iyo hadda ka hirgelin maamul dowlo iyo hoggaan dowlo toona.
Hoos ka dhegayso waraysiga Caaqil cRisaaq Ducaale.
Radio Daljir – Damalo Xagare & Yubbe
2 November 2017: Report on Somalia of the Monitoring Group on Somalia and Eritrea
Salaad Saciid Cartan 11 months
Warsangeli waa qabiil karti iyo karaamo leh; waana dad caqli hogaaminaayo ee aan hunguri sharaftooda siisan.